यसरी शक्तिशाली बन्दै नेपाली सेना, के गर्ला अब भारतले? – PathivaraOnline
Home > समाचार > यसरी शक्तिशाली बन्दै नेपाली सेना, के गर्ला अब भारतले?
admin October 23, 2018 समाचार	0
काठमाडाैँ । नेपाली सेनाले करिब पाँच हजार थान अमेरिकी राइफल एम–१६ हतियार भित्र्याउने भएको छ। सेनाले यस वर्षका लागि झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी खजाना खरिद गर्न लागेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिने नेपाली सेनाका लागि यस्तो राइफल खरिद गर्न लागेको सेनाले जनाएको छ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विश्व शान्तिमा खटिने सेनालाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीको विधिसम्मत खरिदमा सरकारले सेनालाई सहयोग गर्ने बताएका थिए।
खरिद प्रक्रिया भने उनी रक्षामन्त्री हुनुअगावै अघि बढेको छ। ‘हतियार खरिदको विषय जीटूजी नै हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको होला,’ सैन्य प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो जानकारी बुझ्नै पर्छ। हतियार खरिद हुने विषय सरकार–सरकारबीच नै सम्झौता हुने गरेको छ।’
शान्ति सेनामा जानेका लागि आवश्यक परेकाले हतियार जतिसक्दो छिटो नेपाल आइपुग्नुपर्ने सेनाको माग रहेकाे खबर अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ।
मध्यान्हमै गयो ६.० म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
नेपालका गुगल ब्वाई अादित्य मोरङमा फेरि यसरी प्रख्यात भए…